Depiote mpitarika grevy : Mandray karama isam-bolana -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote mpitarika grevy : Mandray karama isam-bolana
16/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vao nilaza fotsiny ny filohan’ny Antenimieram-pirenena fa hotapahana ny karaman’ireo solombavambahoaka tsy tonga manatrika fivoriana dia indro fa mitady hevitra hanarian-dia ireo olona voarebireby sy nokaramaina hitokona etsy amin’ny lapan’ny tanàna ireo solombavambahoaka.
Milamina ny fiainany
Mandray karama an-tapitrisany isam-bolana ireo solombavambahoaka MAPAR sy TIM ireo miampy ny tombotsoa maro samy hafa. Mitaky ny hialan’ny filoham-pirenena sy ny fandravana izao fitondrana izao ireto solombavambahoaka ireto. Aza adinoina fa andrim-panjakana ihany koa ny Antenimieram-pirenena, koa raha tena tsy mankasitraka izao fitondrana izao tokoa ireto solombavambahoaka MAPAR sy TIM ireto, maninona raha izy ireo aloha no mametra-pialana fa tsy mbola miandrandra ireo tapitrisa raisina isam-bolana, izay marihana fa volam-bahoaka?
Ny vahoaka no tarihan’izy ireo hitokona handao ny asa fivelomany sy ny fianarany fa ny fiainan’ireto solombavambahoaka ireto sy ny fianakaviany kosa milamina tsara ary tsy mbola nahita depiote na iray aza nanao grevy tetsy amin’ny lapan’ny tanàna niaraka tamin’ny vady aman-janany satria any an-tsekoly sy manohy asa fivelomany avokoa ny ankohonan’izy ireo.
Efa ho herinandro izao no namoahan’ny gazety vahiny ny famotsiam-bola sy ny kolikoly nataon’i Mamy Ravatomanga, mpamatsy vola izao hetsika etsy amin’ny lapan’ny tanàna izao. Toa mangiana tsy andrenesam-peo ireto solombavambahoaka milaza ho miady amin’ny kolikoly ireto, ny Bianco moa efa tsy lazaina intsony ny mizàna tsindrian’ila fanaony. Raha tena io ady amin’ny kolikoly io marina tokoa no nibaiko ireto depiote ireto nidina an-dalambe, nitarika ny mpiasam-panjakana hampikatso ny asam-panjakana, nitaona ny mpianatra handao ny sekoly dia tokony namoaka fanambarana na nametraka fitoriana mihitsy aza mikasika io raharaha Mamy Ravatomanga io izy ireo.